Ady amin`ny fahantrana Miainga amin`ny foto-pisainana
Fitaterana ana habakabaka Maro loatra ny lesoka
Nisokatra omaly tetsy amin’ny Zone Forello Tanjombato ary haharitra 4 andro ny fampirantiana iraisampirenena andiany voalohany mahakasika ny fitaterana sy ny manodidina izany (salon international des transports, des Logistiques et de la manutention).
Fananan-tany Miroso amin`ny fanovam-penitra
Tsy maintsy hirosoana ny fanatsarana ny sehatry ny fananan-tany eto Madagasikara.
Vahaolana maimaika Hividy solika mivantana ny Jirama
Tapaka nandritra ny filan-kevitry ny minisitra notanterahana teny amin’ny lapam-panjakana Ambohitsorohitra omaly fa omena alalana vonjy maika mandritra ny 3 volana ny fividianana solika anivon’ny Jirama handefa ho an’ireo toeram-pamokarana Jiro.
Doro tanety etsy sy eroa Ireo mpitsoa-ponenana sy ny tevy ala no fositra
Mirongatra ny doro tanety manerana ny faritra amin’izao ary saika potika avokoa ny harena ambanin’ny tany. Nambaran’ny minisitry ny tontolo iainana, Alexandre Georget fa noho ny fisian’ireo olona
Zavatra roa no mamaritra ny fahantrana. Voalohany dia miainga avy amin`ny foto-pisainana. Betsaka ny ezaka ataon`ny fitondrana toy ny lalana, tsena, fotodrafitrasa maro samihafa…
Ny ampitso anefa dia lasa tsena, na koa hanaovan`ny olona fanariam-pako, ny fiantsonana ho an`ireo fitateram-bahoaka dia lasa parking. Manampatra ny tsy fanajana ny lalàna amin`ireny zavatra ireny. Eo ihany koa ny fangalarana ireo andrin-jiro, ny fanaovana maloto eny an-dalambe. N`inona inona ny fotodrafitrasa atao hitondra fandrosoana sy fivoarana dia tsy hisy zavatra miova satria ny foto-pisainana no mitondra azy. Manomboka any amin`ny fanabeazana eo anivon`ny fianakaviana, fiarahamonina ary eny an-tsekoly. Faharoa, ny fandrosoana sy ny fivoarana dia tokony hiainga eo amin`ny fanjakana. Manome asa ny fanjakana, manome fiainana sahaza ho an`ny vahoaka na any an-tanàn-dehibe na any amin`ireny toerana lavitra maro samihafa ireny. Mampihena ny vidim-piainana, ny tsy fandriampahalemana, … Ireo koa no mahatonga ny olona mitsoaka ho aty an-tanàn-dehibe satria very fananana dia miha mahantra. Mila mametraka ny politika ekonomika sy sosialy mazava tsara eto Madagasikara. Izany anefa dia tsy maintsy miainga amin`ny fampianarana sy famoronana asa ary ny fampidirana ny hetra samihafa.